တရုတ်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း SMS ခွဲစိတ်ကုသစာချုပ် SMS မဟုတ်သောအထည်အလိပ်စက်မြင့်မားသောအရည်အသွေးအရည်အသွေး PP Spunbond Nonwoven အထည်ထုတ်လုပ်မှု Lin ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Meiben
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း SMS ခွဲစိတ်ကုသစာချုပ် SMS မဟုတ်သောအထည်အလိပ်စက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေး PP Spunbond Nonwoven အထည်ထုတ်လုပ်မှု Lin
၁။ ပေါ့ပါးသော Polypropylene resin ကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်အဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဆွဲအားမှာ ၀.၉ သာရှိသည်။ ၎င်းသည်ဝါဂွမ်း၏ငါးပုံသုံးပုံသာရှိသည်။ ဒါဟာ fluffy ဖြစ်ပြီးကောင်းသောခံစားရသည်။
၁။ ပေါ့ပါးသော Polypropylene resin ကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်အဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဆွဲအားမှာ ၀.၉ သာရှိသည်။ ၎င်းသည်ဝါဂွမ်း၏ငါးပုံသုံးပုံသာရှိသည်။ ဒါဟာ fluffy ဖြစ်ပြီးကောင်းသောခံစားရ;
2. နူးညံ့မှု - ၎င်းကိုအမျှင်များ (2-3D) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအလင်း - အပူအရည်ပျော်မှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ချောထုတ်ကုန်အတန်အသင့်ပျော့ပျောင်းသောအဆင်ပြေသည်,
3. ရေတွန်းလှန်နိုင်ပြီးအသက်ရှုနိုင်သော - Polypropylene အချပ်များသည်ရေကိုစုပ်ယူခြင်း၊ အစိုဓာတ်ပမာဏလုံးဝမ ၀ င်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောရေတွန်းလှန်မှုမရှိသည်။ ဖိုက်ဘာသည်စိမ်။ ကောင်းမွန်သောလေစိမ့်ဝင်မှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်အထည်ကိုခြောက်သွေ့။ ဆေးရန်လွယ်ကူသည်။
4. အဆိပ်မရှိသောနှင့်စိတ်မကျေနပ်စရာ - ထုတ်ကုန်ကို FDA မှအစားအစာအဆင့်ကုန်ကြမ်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်၊ အခြားဓာတုပစ္စည်းများမပါ ၀ င်၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်၊ အဆိပ်အတောက်မဖြစ်စေရန်၊ ထူးခြားသောအနံ့မရှိသောကြောင့်အရေပြားကိုယားယံစေသည်။
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Polypropylene သည်ဓာတုဗေဒနည်းသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုးမစားသောပိုးမွှားများဖြစ်သည်။ အယ်ကာလီတိုက်စားခြင်း၊ အချောထုတ်ကုန်သည်တိုက်စားမှုကြောင့်စွမ်းအားကိုမထိခိုက်ပါ။
အက်စ်အက်စ် (Prodnct အကျယ်) 1600mm 2400mm 3200mm
ပစ္စည်းကိရိယာ 29x13x10m 30x14x10m 32x15x10m
မြန်နှုန်း 350m / min 350m / min မိနစ် ၃၀
Gram အလေးချိန် 10-150g / m2 10-150g / m2 10-150g / m2
အထွက်နှုန်း (20g / M2 အရထုတ်ကုန်များ) 9-10T / နေ့ရက်များ 13-14T / နေ့ရက်များ 18-19T / နေ့ရက်များ
အကြောင်းအရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုအကျယ် ဂျီအက်စ်အမ် နှစ်စဉ်ရလဒ် လမ်းခရီးကိုစည်းနှောင်
S 1600MM ၈-၂၀၀ 1500T စိန်, ဘဲဥပုံ, လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်လိုင်း
S 2400MM ၈-၂၀၀ 2400T စိန်, ဘဲဥပုံ, လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်လိုင်း
S 3200MM ၈-၂၀၀ 3000T စိန်, ဘဲဥပုံ, လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်လိုင်း
အက်စ်အက်စ် 1600MM 10-200 2500T စိန်, ဘဲဥပုံ, လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်လိုင်း
အက်စ်အက်စ် 2400MM 10-200 3300T စိန်, ဘဲဥပုံ, လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်လိုင်း
အက်စ်အက်စ် 3200MM 10-200 5000T စိန်, ဘဲဥပုံ, လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်လိုင်း
စာတို 1600MM 15-200 2750T စိန်နှင့်ဘဲဥပုံ
စာတို 2400MM 15-200 3630T စိန်နှင့်ဘဲဥပုံ
စာတို 3200MM 15-200 5500T စိန်နှင့်ဘဲဥပုံ
ရက်ကန်းသားမဟုတ်သောထည်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ယန္တရားသည်အထည်မဟုတ်သောအထည်များကိုခွဲစိတ်ကုသသည့်ဂါဝန်များ၊ အကာအကွယ်အ ၀ တ်များ၊ မျက်နှာဖုံးများ၊ အာကာသချည်များ၊ ဥပမာ - မျက်နှာဖုံးများထုတ်လုပ်သည့်မျက်နှာဖုံးစက်များ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက်ခွဲစိတ်ကုသသည့်စက်များနှင့်စစ်ထုတ်သည့်ဝါဂွမ်းအတွက်ဝါဂွမ်းယက်လုပ်ခြင်းစက်များကဲ့သို့သောယက်မဟုတ်သောစက်ယန္တရားများပါ ၀ င်သည်။ အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ယက်မဟုတ်သောအထည်အလိပ်များထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများ - ယက်မဟုတ်သောအိတ်စက်၊ ယက်မဟုတ်သောခေါင်းအုံးအဖုံးစက်၊ ယက်မဟုတ်သောသစ်သီးအဖုံးအဖုံးစက်၊ ရက်မထားသောချည်ထည်အဖုံးစက်၊ ။ ချည်ထည်မဟုတ်သည့်အထည်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ယန္တရားသည်ပစ္စည်းကိရိယာများအပြောင်းအလဲ၏တိကျမှုနှင့်ပစ္စည်းအသစ်များကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပေါင်းစပ်မှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အထွက်နှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုကိုသေချာစေရန်ကွန်ယက်စနစ်များကိုနောက်ထပ်အသုံးပြုသည်။ ချည်ထည်မဟုတ်သည့်အထည်ထုတ်လုပ်မှုစက်ယန္တရားသည်ဘက်စုံသုံး၊ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြင်းနှင့်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့်ဖိုင်ဘာမဟုတ်သောအထည်ထုတ်ကုန်များဆီသို့ ဦး တည်ဖွံ့ဖြိုးသင့်သည်။
ရှေ့သို့ SMS PP အရည်ပျော်သော Nonwoven အထည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ Nonwoven အထည်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်း
အရည်အသွေးမမြင့်သောအထည်အလိပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စက်ပစ္စည်း ...
အလိုအလျောက် bfe 99 စက္ကန့် meltblown မဟုတ်သောအထည် P ...
PP Meltblown ထုတ်လုပ်မှုမဟုတ်သောအထည်အလိပ်ပြုလုပ်ခြင်း ...
1600mm အရည်ပျော်သောအထည်ပြုလုပ်သောစက် PP Nonw ...
Spunmelt ပေါင်းစပ် nonwoven ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, sp ...
ရက်ကန်းသားမဟုတ်သောထည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း China polyprop ...